Nei Tenga Alpha Labs TLB-150 Zvekushanda Kwako
Isu tese taizoda kana kuzadzisa zvibodzwa mune yekurovedza kwaive keke yekufamba, uye pasina rubatsiro rwekuvaka muviri zvinowedzera. Zvinoita zvine musoro kuti tiwane chaicho kwechinguva sezvo isu tichida mashandiro ekusimudzira mashandiro akadai Alpha Labs TLB-150 kuzadzisa zvinangwa zvedu zvemuviri.
TLB-150 kana RAD-150 ndeimwe yemhando dzinopisa kwazvo munyika yezvinhu zvekuvaka muviri. Iko kushandiswa kweTLB-150 kunowanzo sangana nekuvandudzwa kwakakura mumatanho esimba, kumhanyisa, uye kutsungirira panguva yekukwirisa-kurovedza muviri uye zvikamu zvecardio. Chinhu chakanakisa ndechekuti vanofarira kugwinya vanogona kutarisira seti inoshanda yemhasuru uye saizi pasina chiitiko chinodzosera kumashure.
Yakanaka kune vese varume nevakadzi, TLB-150 ine yakasarudzika mikana yekuvandudza kutenderera kweropa mumuviri. Izvo hazvigumisi mukukuvara kwechiropa kana chepfu uye inhibits zvepanyama uye zvehunokemikari neuronal kukuvara. Zvakare, kushandiswa kweTLB-150 hakuenderane nechero chinhu chisina kunaka pane huta, chiropa, uye kubereka system.
Rondedzero yezvakanakira zvine hukama neTLB-150 haigume pano. Inokurudzira kukura kwemhasuru uye inobatsira vashandisi kuwana simba pamwe nemhedzisiro inobatsira yemetabolism uye kumutsidzirwa kwemasuru akakuvara.
Tsamira tsandanyama TLB-150 isarudzo yakanakisa kune vanhu vanoonekwa vaine hutano hwakakomba seAIDS, multiple sclerosis, uye cachexia. TLB-150 inoshandura zviratidzo nezviratidzo zvinosanganisirwa nemamiriro aya, senge kuparara kwemhasuru, kurasikirwa kwemhasuru, kushaya simba, uye kuneta.
Izvi zvinoitwa nekukonzeresa kunatsurudzwa kwesimba remuviri, mhasuru, uye saizi yemhasuru. Uyezve, inowedzera protein synthesis uye nitrogen chengetedzo iyo inobatsira vanovaka muviri kuwedzera mhasuru uye kurongedza mamwe mhasuru.
Inovandudza kutsungirira: TLB-150 ndechimwe cheakanakisa mashandiro anoita mishonga kana zvasvika pakuwedzera kutsungirira kwemhasuru. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira kudzidzisa kwenguva yakareba uye yakaoma mukurovedza muviri. Chikamu chakanakisa ndechekuti iwe unokwanisa kuwana izvi uye zvakawanda zvakawanda mabhenefiti, pamwe nekuderera kwekudzoreredza nguva pakati pekadhiyo kana nguva dzekudzidzira.
Inokurudzira kurasikirwa kwemafuta: TLB-150 inokubatsira kurasikirwa nemafuta emuviri uchiwedzera mhasuru. Iyi sarudzo yakanakisa kune vanhu vakaedza zvakaoma kubvisa mafuta epamuviri uye evisceral.
Inodzivirira uropi: TLB-150 inoratidza kushanda kana zvasvika pakuchengetedza tsinga dzehuropi kubva kukuvara kubva kuamyloid-beta. Uyezve, iyi SARM inoratidza mhedzisiro inobatsira kuchengetedza huropi hwemunhu kurwisa maurotoxin.
Inowedzera simba rakakura uye masimba esimba
Inobatsira mukudzikira uye kupisa huremu
Izvo hazviite mune steroidal mhedzisiro
Inokurudzira hukuru hwemhasuru, saizi, uye dudziro mibairo
Zvakakosha kuwedzera ma testosterone mazinga
Inochengetedza huropi pakukuvara kwakabatana nezera
Yakanakisa SARM yeakaonda yakawanda
Izvo zvinobatsira iwe kuti uwane 15-20 mapaundi mune imwechete kutenderera
Inokubatsira iwe kuwana mhasuru uye kutemwa, shredded panguva imwe chete
Inovandudza huwandu hwemapfupa emaminetsi
Inokurudzira mashandiro emitambo ari nani
Yakanakira SARM kune ese ari maviri kubhowa uye kugadzirisa
TLB-150 vs Testosterone
Testosterone inoonekwa seyakakwana yekuenzanisa template yekuenzanisa iyo anabolic uye androgenic mhedzisiro yemakemikari akasiyana. TLB-150 ine inoshamisa anabolic / uyerogenic chiyero che90: 1. Izvi zvinoratidza kuti ingangoita sevanabolic seTesttosterone, asi inoshaya iyo androgenic mhedzisiro.
TLB-150 isarudzo yakanaka kwazvo kune vanovaka muviri, vanogweta magetsi, vanofarira kugwinya, vanoshambira, mabhasikoro, uye vanochinjika-fitters. Izvo zvinongori nekuda kweiyo yakawanda yemhedzisiro mhedzisiro iyo inowanzo kuve yakabatana nekushandisa steroid. Zvimwe zvinokanganisa zvinosanganisira mafuta ane ganda, acne, gynecomastia, kukuvara kwechiropa, uye nezvimwe, zvinokonzerwa ne androgenic mhedzisiro yekuita-inowedzera zvinodhaka.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti zvinotora vanhu makumi mana muzana muzana yeTesttosterone kuti vawane mhedzisiro yakafanana neTLB-40. Uyezve, vanhu vamwe neumwe vanofanirwa kutora zvakapetwa makumi matanhatu zvakapetwa neiyo TLB-150 muyero kuti vawane prostate mhedzisiro. Zvese mune zvese, TLB-60 ndiyo yepamusoro sarudzo kune Testosterone chero zuva.
Yakakurudzirwa Dose yeTLB-150
Iyo yakakurudzirwa dhizaini yeTLB-150 ndeye 5-20mg zuva rega rega mukutenderera kwemasvondo masere kusvika gumi nemasere. Iyo yakaringana zuva nezuva dosi ndeye 8-14mg zuva rega rega mukutenderera kwe10-20 mavhiki evarume. Iyo yakakurudzirwa dhizaini yeTLB-10 yevakadzi ndeye 14-150mg pazuva mukutenderera kwemavhiki e5-10.
TLB-150 inogona kushandiswa yoga mumadhivha ezuva nezuva e20mg mukutenderera kwemasvondo masere kusvika gumi nemasere. Mukuwana kutenderera kwevarume, 8mg yeTLB-12 kaviri pazuva inogona kushandiswa padhuze ne10mg kaviri pazuva reOstarine uye 150mg kaviri pazuva reMK-10. Mune yakatetepa yekuwana kutenderera kwevarume, 10mg kaviri pazuva reTLB-677 inogona kushandiswa padhuze ne10mg mazuva ese e Cardarine uye 10mg pazuva reYK-11.
Kana iwe uchironga kumhanyisa iyo TLB-150 kutenderera, iwe unofanirwa kushandisa on-kutenderera rutsigiro uye utevere nayo post kutenderera kurapa. Izvi zvinokubatsira iwe nekukurumidza kuchengetedza yako yakaoma-yawakawana mhasuru mashoma uye masimba anowana.
Ndekupi kwekutenga Alpha Labs TLB-150?
Chinhu chinonakidza cheAlfa Labs TLB-150 ndechekuti yakachengeteka asi ine simba rekuvaka muviri yekuwedzera. Unogona tenga chaicho Alpha Labs TLB-150 kubva SARMS Chitoro UK uyo anogara achiisa kuchengetedzeka uye kuchengetedzeka kwevatengi vacho kutanga.
Ese Anosarudza Androgen Receptor Modulators, prohormones, PCT zvinodhaka, uye ekuvaka muviri zvinowaniswa nazvo zvinopinda kuburikidza neyakaomarara yechitatu-bato rebhu kuyedza iyo inovimbisa yega bhodhoro rimwe chete rakatengwa newe rakaratidzirwa rakachengeteka kushandisa. Kana izvi zvisiri zvese, kutumira kubva ku SARMS Chitoro UK inokurumidza, inoshanda, uye yakangwara. Icho chinongova chimwe chezvikonzero zvisingaverengeke nei ichi chisarudzo chakanakisa kutenga maSARM kubva.
SARMS Chitoro UK ine rusingaperi runyorwa rweakanaka, asina rusaruro, uye anoyevedza maSARM maongororo. Iyo yepamhepo sosi ye premium Selective Androgen Receptor Modulators, prohormones, PCT zvinodhaka, uye ekuvaka muviri zvinowedzera zvinobatsira iwe kuita sarudzo ine ruzivo rwezvinangwa zvekutsvaga.
Usangogara mumakwikwi; kuuraya makwikwi! Tenga chaicho Alpha Labs TLB-150 kubva kuSARMS Chitoro UK izvozvi!